कछुवाको मासु खादा ७ जनाको मृ'त्यु,डाक्टरको कुराले उड़यो होस् ! - ramechhapkhabar.com
कछुवाको मासु खादा ७ जनाको मृ’त्यु,डाक्टरको कुराले उड़यो होस् !
तान्जानियाको पेम्बा टापुमा कछुवाको मासु खाँदा सातजनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, ३८ जना बिरामी भएका छन् । मृत्यु हुनेमा एक बालक पनि छन् । तान्जानियाका तटीय क्षेत्रमा कछुवाको मासु खाने चलन छ । स्थानीयको मृत्यु भएपछि प्रशासनले कछुवाको मासु खान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
टर्टल फाउन्डेशन नामक संस्थाका अनुसार कछुवाले खाने विषालु लेउका कारण मासु पनि विष हुन्छ । विषालु मासुले विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई नराम्रो असर गर्ने भन्दै संस्थाले आगामी दिनमा त्यस्तो मासु नखान सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
तान्जेनियामा कछुवाको मासु खाँदा बारम्बार मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । यसअघि मार्चमा म्याडगस्करमा कछुवाको विषालु मासु खाँदा नौ बालबालिकासहित १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अमेरिकी सांसद उमरले भनिन् – मलाई ज्या न मा र्ने ध म्की आयो
अमेरिकी मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमरले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएकी छन् । उनले भ्वाइस मेल जारी गरिन्, जसमा उनलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको थियो। उमरले मुस्लिम विरोधी टिप्पणीका लागि सांसद लरेन बोबर्टसँग सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने माग गरेका थिए। जसलाई बोबर्टले सिधै अस्वीकार गरेका थिए ।
मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनमा इल्हामले रिपब्लिकन नेतृत्वलाई मुस्लिम विरोधी घृणाको बिरूद्ध खडा हुन र यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई रोक्न आह्वान गरे।
बोबर्टले ओमरलाई जिहादी समूहको सदस्य र आत्मघाती आक्रमणकारीसँग जोडिएको बताए । बोबर्टले फोन कलको क्रममा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न अस्वीकार गरेपछि ओमरले सोमबार भ्वाइसमेल प्राप्त गरेको बताए। गत हप्ता ओमरको बारेमा बोबर्टले गरेको टिप्पणीपछि यी दुई सांसदहरूले खुलेर एकअर्कालाई आक्रमण गरिरहेका छन्।